कोरोनापछि चीनमा फैलियो नोरो भाइरस, एकाएक १६ बच्चा अस्पताल भर्ना, फैलने जो’खिम बढ्यो – Wow Sansar
सुन्तलाको बोक्राले पनि बनाउँछ अनुहार गोरो र चम्किलो यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
अकस्मात् धन लाभ हुनुभन्दा अगाडि देखिन्छन् यस्ता सङ्केत,के तपाईले देख्नुभएको छ ?
उपत्यकामा चोक-चोकमै सटर खाली, कोठा सामान उठाएर बा’हिरिने पनि बढ्दै
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ ॐ लेखि सक्दो सेयर गरौं
शाहरुख खानकी छोरीलाई ‘काली बोक्सी’, ‘काली बिराली’ भन्ने को हुन् ?
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनापछि चीनमा फैलियो नोरो भाइरस, एकाएक १६ बच्चा अस्पताल भर्ना, फैलने जो’खिम बढ्यो
काठमाण्डौं । चीनमा अर्को रोग फैलिएको छ । एकाएक फैलिएको उक्त रोगको कारण नोरो भाइरस हुन सक्ने बताइएको छ । एकै स्कूलका १६ बच्चा अस्पताल भर्ना भएपछि उक्त अनुमान गरिएको हो ।
ग्लोवल टाइम्सका अनुसार दक्षिण चीनको गुआंगसी झुआंग स्वायत्त क्षेत्रको दाहु याओ स्वायत्त काउन्टीमा चलिरहेको एउटा बाल कक्षामा अध्ययनरत १६ जना बालबालिका एकाएक बिरामी भएका थिए । उनीहरुलाई बान्ता हुने लक्षण देखिएका थिए । उनीहरुका गरिएको परिक्षणले प्रारम्भीक रुपमा नोरो भाइरससँग मेल खाएको बताइएको छ ।
उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ कि अभिभावकहरूले बुधवार राति बिरामी बच्चाहरूलाई अस्पताल लगे र अस्पतालमा अझै धेरै जना बच्चाहरू बिहीबारसम्म थप उपचार गरीरहेका थिए ।
एक अभिभावकले मिडियालाई बताए कि उनको छ बर्षे बच्चाले धेरै चोटि बान्ता गरे र बुधवार स्कूल पछि पेट दुख्ने लक्षण देखिएको छ । केही छोटो विराम पछि, उनीहरूलाई फेरि बान्ता हुने र पानी पनि बान्ता गर्ने आमाबाबुले धेरै बच्चाहरूको समान लक्षण रहेको बताउँदै भने ।
बिहीबार दिउँसो १२ बजे, दाहुआ याओ स्वायत्त काउन्टीमा रोग रोगथाम केन्द्रका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार जाँच कर्ताहरुले बच्चाको नमूनामा नोरोभाइरस भेट्टाएका छन् ।
सीडीसी स्टाफले थप अनुसन्धानका लागि उक्त स्कूलको अन्य बच्चाबाट नमूना लिए । बिहीबार ग्लोबल टाइम्स पुग्दा बच्चाहरूको उपचार गर्ने स्थानीय अस्पतालमा यस घटनाको बारेमा अरू कुनै विस्तृत जानकारी थिएन । सांकेतिक तस्वीर
पृथ्वीतिर बढ्दैछ क्षुद्रग्रह, खतरनाक हुनसक्ने नासाको चेतावनी
भोलि देखि नै लागु हुने, सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक (हेर्नुहोस् भिडियो)
सपनामा नागदेवताको दर्शन पाउनु भयो भने यस्ता हुन्छन संकेतहरू ॐ लेखेर एक Shareगर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।